Ku xiiirsan Qaybtii 4aad ee uxud
Markii ay ciidanka gaaladu is urursadeen oo ay noqonayeen ayaa hoggaamiyahoodi Abuu Sufyaan fuulay buur oo dhawaaqay isaga oo leh "Maaxammed ma idinku jiraa", looma jawaabin, markaas ayuu yiri "ina abii Quxaafa (Abuubakar) ma idinku jiraa?" looma jawaabin, markaas ayuu yiri "Cumar binu Khadhaab ma idinku jiraa?", looma jawaabin. Qof kale ma uusan magacaabin maxaa yeelay wuxuu ogaa booska ay saddexdaasi ka joogeen islaamka iyo haddii ay dhintaan in islaamku halis ku jiro, wuxuu intaas ka dib yiri "kuwaas waa la idinka kaafiyey". Waxaa markaas is hayn waayey Cumar binu Khadhaab oo yiri "cadowgii Allow kuwaas aad soo sheegtay way nool yihiin, Allena wuxuu u dib dhigay wax ku caro geliya", markaas ayuu yiri "dadkiinnii la dhalan rogey ma aanan amrin, kamase xumaan". Ka dib wuxu yiri "hubulow kor noqo", Rasuulka SCW ayaa asxaabtii ku yiri "miyeydaan u jawaabeyn?", markaas ayey dheheen "maxaa dhahnaa?" wuxuu yiri dhaha "Allaah baa sarreeya oo weyn", markaas ayuu Abuu sufyaan yiri "Cusaan leenahay idinkuse Cuse ma lihidin". Rasuulka SCW ayaa asxaabtii la hadlay oo ku yiri "miyeydaan u jawaabeyn?" waxay dheheen "maxaan dhahnaa?", wuxuu yiri dhaha "Gargaare ayaanu leennahay idinkuse gargaare ma lihidin". Wuxuu markaas Abuu Sufyaan yiri "maanta maalintii Badar ayey u dhigantaa, dagaalkuna waa wadaameysi", Cumar ayaa u jawaabay oo yiri "ma sinnin, dadkayagii la diley jannada ayey ku jiraan, dadkiinniina naar". Wuxuu markaa Abuu Sufyaan yiri "Kaalay Cumarow". Rasuulka ayaa Cumar ku yiri "u tag oo fiiri xaalkisa", Cumar ayaa u tegey Abuu Sufyaan, markaas ayuu Cumar ku yiri "Ilaah baan kugu dhaarshaye Cumarow ma dilnay Maxammed?", Cumar wuxuu yiri "maya, haddana wuu ku maqlayaa", wuxuu yiri Abuu Sufyaan "adiga ayaan kaaga rumeyn badnahay ibnu Qum'a". Abuu Sufyaan iyo ciidankiiisii way baxeen iyagoo oranaya "ballanteennu waa Badar sannadka soo socda", markaas ayuu Rasuulku SCW nin asxaabtiisa ka mid ah ku yiri "ku dhe waa yehay waa inoo balllan".